China 6 axis Mig welding robhoti yekuchengetera rack Mugadziri uye Mutengesi |Yunhua
HY1006A-145 ndeimwe yeanonyanya kutengesa robhoti yeYooheart, unogona kuve nayo yekuseta zvikamu zvakawanda, senge rack yekuchengetera.
ine zvimiro sezviri pasi apa:
-Welder sarudzo (Megmeet, Aotai)
-Competely mhinduro dziripo
Mig welding robhoti yekuchengetera rack
Iwo matanhatu axis welding robhoti ndeimwe yeakajairika robhoti yeYooheart chigadzirwa.Sezvaunoziva, zvinopfuura 50% zvezvinhu zvinodiwa kukwenenzverwa icarbon simbi, saka kuitira weld kabhoni simbi zvirinani, kune akawanda akakosha magadzirirwo erobhoti nhanhatu axis.Kune anopfuura 5000 mayunitsi akatengeswa muChina pagore nekuda kwekugadzikana kwayo uye kusimba.
Seimwe yeanozivikanwa maindasitiri welding robhoti, ine ruoko rwekurerutsa nemin kupindira uye max kuchinjika, iyo welding ikozvino voltage uye waya yekudyisa inogona kudzorwa panguva chaiyo-nguva.Iwo welding maparamendi emutsara we welding anogona kusetwa zvakananga pane pendant yekudzidzisa yerobhoti.
Robhoti synergy ine imwe axis chinzvimbo
Mumufananidzo uyu, mutengi wedu anoshandisa 2000mm kusvika robhoti batanidza maviri 1 axis chinzvimbo
Robhoti rinoramba richiita welding kana vashandi vakaisa chidimbu chebasa pane imwe positioner.
Nenzira iyi, kuderedza mari uye kusimudza chibereko.
2000mm kureba ruoko Robot
Mufananidzo wekurudyi unoratidza yedu 2meter inosvika robhoti welding mhuka fenzi.
chidimbu chebasa chikwere pombi, Mutengi shandisa Aotai 350A welder ine yakaderera spatters basa.
Marobhoti maviri achishanda pamwechete
Kuruboshwe mifananidzo inoratidza maviri Yooheart robhoti synergy pamwechete.
Kuti usimudze kumhanya kwewelding, uye kugadzirisa kuomerwa kwenzvimbo yewelding (dzimwe nguva robhoti rimwe rinosangana nedambudziko rematochi), Robhoti mbiri dzekushongedza dzichaiswa.
Zvakapfuura: Plasma yekucheka Robot
Zvinotevera: Steel Fitness Equipment Arc welding robhoti
Yakanaka mig welding robhoti
robhoti welding application